Duullimaad la joojiyay | Hallå konsument – Konsumentverket
Start/otherlanguages/other-languages/Other languages/so/somaliska/Soomaali/so/articles/duullimaad-la-joojiyay/Duullimaad la joojiyay
Duullimaad la joojiyay
Inställt flyg - Somaliska
Hadii duullimaadkaadu noqdo mid la joojiyo waxa aad xaq u leedahay bedelsiin iyo saacidaad ka timaada shirkadda duulimaadka. Boggan waxaad ka helaysaa warbixn ku saabsan bedelsiin intee la eg ayaad ka dalbi karaysaa iyo sida aad horay ugu socon karaysid haddii ey shirkaddu diiddo dalabkaada.
Marwalba xaq uleedahay dib u balansasho ama lacag dib usoo celin
Marka duulimaadkaada la joojiyo, sharciga EU:na uu koobayo, waxa aad xaq u leedahay mid ka mid ah kala doorashada soo socota:
Dib u balansasho duulimaadka suurtagalka ah ee xiga ama mid markale oo danbe
Dib u celin lacageed oo ku aadan qaybta tikidka ee aadan adigu ka faa’iidaysan
Shirkadda duulaadmidku waa in ay mar walba kuu soo bandhigtaa kala doorashada dib u balansasho iyo dib usoo celin lacageed. Waxay qusaysaa iyada oo waxba uga xirnayn sababta dulimaadka loo joojiyay, iyo aaysan waxba uga xirnayn goorta aad heshay warbixinta ku saabsanin duulimaadkii la joojiyay.
Dib u balansasho
Hadii safarka dib loo balansanayo waa in loo balansadaa safar u dhigma. Hadii ay tahay in aad sugto wax ka badan laba saacadood shirkadda duulimaadyadu waa in ay kuusoo baandhigtaa cunto iyo cabitaan bilaasha qayb macquula oo u dhiganta waqtiga sugidda. Shirkadda duullimaadyadu waa in ay ku wargelisa xaquuqda ad leedahay. Hadii aad doorato in aad dib u balansato duulimaadka suurta galka ah ee xiga oo ay macnaheedu tahay in aad sii joogto garoonka diyaaraha ama safarkii aad u socotay oo hal iyo laba habeen ah, waa in shirkadda duulimaadku qabtaa habeen dhax hoteel ah.
Dib usoo celin lacag
Hadii aad doorato dib usoo celin shirkadda waxa waajib ku ah shirkadda duullimaadka in ay dib usoo celiso kharashka tikidka 7 maalmood gudahood. Dib usoo celinta waa in ay u dhacdaa lacag cadaan ah, qaabka kala wareejinta bangiga ee elektooniga ah, bangigiiro ama jeeg. Hadii aad ku raacdo dib usoo celintu waxa ay u dhici kartaa dalab warqad lacag bixin ama qaab kale.
Dib usoo celin tikidka ah macnaheedu waa heshiiskii la lahayd shirkadda duulimaadku inuu soo idlaaday, oo aad adiga nafsadaada mas’uul ka tahay guri kusoo noqoshadaada. Markaa shirkaddu uma baahna in aay qabto tusaale ahaan cunto, cabid ama kharash hoteel.
Waxa jirta laba nuuc oo bedelsiin dhaqaale oo aad xaq u leedahay marka duulimaadkaada la joojiyo. Mid waxa lagu magacaabaa u gudid midda kalana magdhow.
waxaad xaq u yeelan kartaa magdhow qaab cadad lacag go’an oo euro ah hadii duulimaadkaadu uu hoos imaanayo xeerarka EU. Ugudid waxaa loola jeedaa in laguu bedelo waqtigii kaa lumay. Inta uu la egyahay cadadka aad xaq u leedahay waxa uu ku xiran yahay dhirirka duulimaadka:
Xaqaada ah ugudid waxa gooynaya marka aad hesho go;aan ku saabsan waqtiga safarkaada cusub iyo inta farqi u dhaxaysa waqti ahaan waqtigii asalka ahaa. Dhacdadaan soo socda xaq uma lihid ugudid:
Markaad hesho warbixinta ku saabsan isbedelka 14 maalmood ama ka badan kahor isocdaalka qorsheysnaa.
Markaad hesho warbixinta ku saabsan isbedelka 7-13 maalmood kahor socdaalka qorsheeysnaa, iyo waqtiga imaanshahaada ee cusub ay tahay ugu danbeeyn 4 saacadood kadib waqtiga imaanshaha asalka ahaa.
Markaad hesho warbixinta isbedelka 7 maalmood kahor socdaalka qorshaysnaa, iyo waqtiga socdaalkaada cusub yahay ugu badnaan 1 saac kahor socdaalka asalka ahaa iyowaqtiga imaanshahaada cusub yahay ugu danbays 2 saacadood kadib waqtiga imaanshiyaha asalka ahaa.
Hadii duulimaadkaadu hoos imaanayo xeerarka EU ama haddii kalaba waxa aaad xaq u yeelan kartaa bedelsiin ku saabsan kharashaadka ku galaya sababta duulimaadka la joojiyay awgeed. Waxa tusaale ahaan ku saabsan tahay in aad ku qasbanaatay in aad cunto ka iibsato gegida dayuuradaha, ay ku dhaaftay hal habeen hotel ah ama aad lumisay daqli shaqo. Waa in aad cadayn kaarto kharashaadka ku galay waana in ay ku xirnaadaan dib u dhaca.kaydi ddhamaan waraaqaha lacag bixintaada cadayn ahaan.
Ma heli karaysid bedelsiin dhaqaale oo ku saabsan dhib saaykoolaji ahaan kuu soo gaaray, dhibka ku saabsan in aad u baahato sugid, dareen aadan jeclaysan ama wax u dhigma oo ay sababtu tahay duulimaadka la joojiyay.